Taariikhda Dowladaha Somaliya - BAARGAAL.NET
af soomaali taariikh
Somalia wuxuu ka mid yahay wadamada ugu dada wayn Africa marka laga reebo Masar iyo Ethopia Labaads oo sida la sheegaayo Ka da waawayan Somalia Ethpoia sida taariikhda Qoran lagu hayo waxaa lagu tilmaam in uu yahay wadanka Africa ugu dad wayan Siday sheegayaan waxaa lagu tilmaam in uu gaar siisana aialaa Nebi Suleemaan (CS) Qarnigiisii oo ay Xukumi jirtay
Boqorad la oran jiray Shiiba. Masar isaga laftirkiisu kama da yara oo ilaa iyo Faracinadii iyo ka horba waa soo jiray. Somalia marka waxay u dhaxaysa labadaa wadan oo aadka u dada wayan Sida Taariikhda Caalamiga ahi Qoraysan waxay Sheegaysaa Sonalida da ka ahi in ay ku jioreen xukmadii Faraacinada oo ay so gireen ilaa Taariikhdaa dheer Sidaan aragnaan Dadka somalida ahi waa Dad iskumid ah oo aan mid mid ka duwani jrin badan koodu, in kastoo ay is badalaan oo kala duwaan bulsho ahan jirto hadan guud ahaan waa isaga mid waxa aan isan is badalin wa dhulak oo soo jireen ah intaas uu soo jirayan malin walba laysku waydaranayey oo midba mid kale u soo dhiibayey sidaas oo ay tahay somaliya magacan maanta la yirahdo lam oran jirin waydadii hore Xukunka maanta ka socdaan kuma jiri jirin ee waxay lahayd xukuma kal duwan sida Buuga ug wayn aduunka oo ay leeyihiin Xabashidu qorayo wuxuu leeyahay Somaliy amaba Bariga afrika waxaa xukumi jiray Nin boqoro ah oo ah xabashi siday u muuqatan wax weeyaan in somlidu ahaayen dad uu u talin jiray Boqorkii xabashida lakiin ah muslin sida ay sheegayaa yurubiyaanka ragoodii hore ee ahaa qoraaga ee dhulka afrika u tagay baadhista ay sheegayan in somaliya jir jirtay xilyada ayana ka heleen bawagihii la qoray wayadaa oo markaa ay ahayeen dad iyagu is maamula oo aan amar ka qadan xabashdii xiligaa jirtay sidaan sheekoyinka ku mqalay waxaa badan aad afka loogu dhiftaa Wiilwaal oo ahaa boqor siday sheegayaan culimada taariikhdu wuxuu jiray wiilwaal 1600 kii oo hada laga jooro muda aad u dheer. sidaan sheekoyin keen ku hayan wiilwaal wuxu ah nin laga baqo geesi iyo aftahmnimo u dheertahay, intaas uun baan ka maqalay xukun iisii lakiin sidii dowladiisu ahayd iyo siduu somali ula dhaqmi jiray waxan maqaly meehe wax kale kam hayno markaa taariikhda saxda ah ee somali isxukun ay gacantooda isku xukuman ay u bilabatay waa 1960 gii markii gobanimada laga qaatay isticmaarkii xiligaa. markaa al aan firini sidii loogu soo dagalamay dowaldaa dimuqradiga ah iyo siday ku dan baysay markaa halakan waxaan ku soo koobayaa bal siyaasada dowalda ama xukunka somaliya iyo siduu ahaa marka laga bilaabo intaan wada ogsonahay. siyaasad gooni isku taagta somaliya waxaa ugu horeyey Darawiishti oo diday xukun kii isticmaarka gooin ulabaxday xukunkoodii raayna ina ay somali meel isku wada xukunto kalan baxdo gacanta gumaysta amarkiisa.